यस्तो दिन त कसैको नआओस श्रीमतीको मृ त्युपछि न कोही म ला मी आए न कसैले ला श बोक्न स घाय ! « गोर्खाली खबर डटकम
यस्तो दिन त कसैको नआओस श्रीमतीको मृ त्युपछि न कोही म ला मी आए न कसैले ला श बोक्न स घाय !
२०७७ असोज ६ गते मङ्गलवार प्रकाशित
काठमाडौ । केही दिन अगाडि भारतीय पत्रिकामा उडिसाका एक गरिब आदिवासी दाना माझीको एक यस्तो तस्वीर छापिएको छ , जसले मन मस्तिष्कमा सबै मानिसलाई नराम्रो असर गरेको छ । दाना माझी आफ्नो काँधमा श्रीमतीको लाश लिएर लगभग १२ किलोमिटर पैदल हिडे ।माझीकी पत्नीको टिबी रोगबाट मृत्यु भएको थियो । माझीसँग मृत श्रीमतीको शव घर लैजानका लागि आवश्यक रकम थिएन । लाश वाहनले धेरै नै रकम मागिदिए ।
मेस्सी बार्सिलोना सँगै,नविकरण गरे सम्झौता